Geneer - တံခါးဝန်ဆောင်မှု SOURCE မှအေးဂျင့်, တံခါး
Whatsapp / WeChat / လူဆိုးဂိုဏ်း: 0086-15989076553 / 15219119980
လေဆိပ် Up ကို Pick
ကွမ်ကျိုး / Foshan ရှိသောအရင်းအမြစ်ရှာဖွေရေးအေးဂျင့်
အဘယ်သူမျှမက hidden တာဝန်ခံ
One Stop ပို့ကုန်ဖြေရှင်းချက်
A ကနေ Z ကိုရန်အလို့ငှာတက် Follow
တတ်နိုင်ကော်မရှင်အနိမျ့ 1% မှ
နိုင်ငံများစျေးကွက် Worldwide မှအထက်ပေါင်း 100
တစ်ခုလုံးကိုကုမ္ပဏီအတွက်ကျွမ်းကျင်အင်္ဂလိပ်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာအဘယ်သူသည်ရေ 100 Staff
ကွမ်ကျိုးအတွက်ပြခန်းနှင့်ဂိုဒေါင်၏ 5,000+ စတုရန်းမီတာ
ပို့ကုန်စီးပွားရေးအတွက် 11 နှစ်အတွေ့အကြုံ
•ပြပွဲ (ပရိဘောဂ, လက်ဆောင် mdf ဘုတ်အဖွဲ့, အစက်အပြောက်အလင်း, ပန်းအိုး, ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းတို့ပါဝင်သည်)
•ကျောင်း (ပရိဘောဂ, မှတ်စုစာအုပ်, အုပ်ကြွပ်, အနက်ရောင်ဘုတ်, ကလောင်, ဂဏန်းပေါင်းစက်တို့ပါဝင်သည်)
•ပွဲများ (ဘုတ်အဖွဲ့ကို advertise, ဒိုင်းခွေ, screen ကိုဦးဆောင်, ပရိဘောဂ, စားပွဲပေါ်မှာအထည်များပါဝင်သည်)
•အိမ်ခြံမြေ (ပါဝင်သည် gypsum ဘုတ်အဖွဲ့ကမီး rated ဘုတ်အဖွဲ့, တံခါး, ပြတင်းပေါက်, အုပ်ကြွပ်, ပရိဘောဂ)
• Supermarket (ယေဘုယျကုန်သွယ်, အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း, ဖိနပ်, ပရိဘောဂ, ကလေးကစားစရာ, ဓာတ်လှေကား, ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း)
•ဟိုတယ် (ပရိဘောဂ, အလင်း, မြို့ရိုးကိုစက္ကူ, မွေ့ရာ, အိပ်ရာစာရွက်, အလင်း, သန့်ရှင်း, ကုလားကာတို့ပါဝင်သည်)
•ရွေးကောက်ပွဲ (တီရှပ်, ဦးထုပ်, unitform, ဆုတံဆိပ်, အလံ, ခွက်, စျေးဝယ်အိတ်, ထီး, ပူဖောင်း, bedge ပါဝင်သည်)
•စားသောက်ဆိုင် (ပရိဘောဂ, မီးဖိုချောင် applainces, ပန်းကန်, ညစာထည်, စားပွဲပေါ်မှာအထည်, တစ်ခါသုံးအထုပ်, display ကိုဦးဆောင်, CCTV တို့ပါဝင်သည်)
•မင်္ဂလာဆောင် (ပရိဘောဂ, ကုလားကာ, စားပွဲပေါ်မှာအထည်, လက်စွပ်, ဇာတ်စင်, မဟာပန်းပွင့်, ဇာတ်စင်အလင်းကိုဦးဆောင်, မီးခုံ, ညစာထည်, ဆုကြေးဇူးကိုအထုပ်တို့ပါဝင်သည်)
Play gambling and win at Vavada Casino. Sign up through the link, and getano deposit bonus of 100 freespins. Win jackpots from the comfort of Vavada.
Play slot machines for money on the official site XCasino. The site is also available classic table games. You can also mgrate in XCasino completely free demo mode. Enjoy gambling on the Internet at XCasino.
Gambling on the siteeJoyCasino is very exciting and interesting. Good bonuses, fast payouts, recognizable style. Come and play at the best online casino. Choose JoyCasino.
Gambling service Jozz – proven reliable gambling portal. Looking foralicensed online casino? Play and win jackpots at Jozz gambling club.
ကျနော်တို့ From-- မည်သို့လုပ်ပါ Do တစ်ဦးက Z ကိုမှ
က c ။ english ဘာသာပြန်ဆိုသူ
အီး။ စျေးဝယ် / ခရီးစဉ်
f ။5ပေးသွင်းတစ်ဦးချင်းစီကို item Sourcing
ဇ။ အမိန့်အသေးစိတျ comfirm
ဌ။ ပေးပို့သည့်နေ့စွဲ comfirm
စ။ အလုပ်သမားအဖွဲ့ကို loading
က q ။ နှစ်ပေါင်း 20 နှင့်အတူကြုံတွေ့
r ကို။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ကြဉ်
t ကို။ တန်ဖိုးနည်း
v ။ အဆိုပါရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်
w ။ တင်ပို့ရောင်းချမှုစီစဉ်
x ကို။ အဆိုပါသင်္ဘောကို update
y က။ ထုံးစံအဘို့အစာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ပါ
z ။ installation ကိုတက် Follow
Whatapp / WeChat / လူဆိုးဂိုဏ်း: ဇွန်လ: 0086-15989076553 / 15219119980
အီးမေးလ်: geneer-gz@hotmail.com &nbsp327889356@qq.com
Adress: B8052-8053, 2F, အနီရောင်စတား Macalline Mall, Jinshazhou, ကွမ်ကျိုး, တရုတ်
Skype ကို: 0086 15989076553
© Copyright - 2010-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။ ကုန်ပစ္စည်းများလမ်းညွှန်- အသားပေးထုတ်ကုန်များ- hot Tags:- Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
Guangzhou Kitchen Cabinet Trader, Sourcing Agency In Guangzhou, Kronospan Kitchen Cabinet, ကွမ်ကျိုးရှိသောအရင်းအမြစ်ရှာဖွေရေးအေးဂျင့် , Sourcing Servise In Guangzhou, Guangzhou Kitchen Cabinet Purchase,